Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo u coddeeyay in ay canshuur bixiyaan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo u coddeeyay in ay canshuur bixiyaan
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo u coddeeyay in ay canshuur bixiyaan
Xildhibaannada Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta u coddeeyay in ay canshuur ka bixiyaan dakhliga soo gala. Kaddib dood dheer oo ku saabsan warbixinta Guddiga maaliyadda ee baarlamaanka uu soo gudbiyay.
Xildhibaannadu waxay si aqblabiyad ah ugu coddeeyaan in ay canshuur dakhligooda ka bixiyaan.149 xildhibaan ayaa u coddeeyay,sadax xildhibaan ayaa ka gaabsaday, mana jirin wax diidmo ah.
Xildhibaannada ayaa laga daayay in ay canshuur bixiyaan miisaaniyadii ugu danbeysay, sida uu qabay qodob ay kula heshiiyeen wasaaradda maaliyadda oo u ogolaaday wasaaradda in ay soo gudbiso miisaaniyadda dheeriga ah.
Guddiga maaliyada iyo wasiirka maaliyada Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isku raacay in canshuurta laga gooyn doono ay noqon doonto 8 boqolkiiba,lagana bilaabi doono bisha Oktoober.
Wasaaradda maaliyadda ayaa in badan waday dadaal ah in xildhibaannadu canshuur bixiyaan. Waxaana dadaalkaas ku taageeray xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Osman Guleed. Sida tilaamaameyso warqad ka timid xeer ilaaliyaha.Bixinta canshuurta ee xildhibaanada ayaa ah mid sharci iyo akhlaaq ahaanba wanaagsan.
Dakhliga xildhibaanka ayaa ah $4,100 bishii,intaas waxaa sii dheer $1,100 oo loogu talo galay ammaankooda. Celceliska mushaarka shaqaallada dawlada ayaa ah inta u dhaxeysa $200 ilaa 700 dollar. Sidoo kale agaasimayaasha ayaa hela $1,000.Cabirka shaqa la,aanta dhalinyarada ayaa sii caga-cageyna 70% iyada oo dhalinyaradu inta badan ay ku adagtahay in ay shaqo helaan.
Intii lagu guda jiray dooda ayaa xildhibaannada qaar ay ku eedeeyeen warbaahinta in ay been ka sheegeen , beentaas oo ah in xildhibaanadu canshuurta diideen.
Ummada media oo ah bartii ugu horreysay oo gadaal ka riixda isbadalkaan, waa u farxad in wacyi galinta shacabka oo ay hormuudka ka ahaayeen ay horseedo in baarlamaanku ka jawaabo. Waa guul usoo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleWaa kuma Emmerson Mnangagwa?
Next articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo u safraya Kenya iyo Ivory cost